16/01/2018 admintriatra Tresaka 0
Mitokona indray hono ny mpianatra eny amin’ny oniversite Ankatso sy eny Vontovorona. Mazàna resaka vatsim-pianarana sy fampitaovana no fototry ny grevy fa tsy mbola nisy fitokonana mikasika ny kalitaon’ny fampianarana. Resa-bola e! Izany no laharam-pahamehana ho an’ny mpianatra eny amin’ny oniversite.
Eto amintsika irery no misy izany mpianatra any amin’ny oniversite zaraina vatsim-pianarana tahaka ny mizara mofo izany. Mifanohitra amin’ny zava-misy eto amintsika ny any amin’ireny oniversite malaza any ivelany. Ny mpianatra no mandoa saram-pianarana ary tena lafo dia lafo tokoa. Mazava ho azy, avo lenta ny fampianarana, avo lenta ary ifandrombahan’ireo orinasa sy indostria vaventy maneran-tany izay mivoaka avy amin’ireny oniversite ireny. Harvard, Cambridge, Darmouth College, Massachussets Insitute of Technology, sns. Tsy vitan’ny hoe ifandrombahan’ireo orinasa vaventy fa mamokatra ary manampy ny fampandrosoana ny fireneny.
Tsy misy maha ratsy ny vatsim-pianarana mihitsy saingy ny fomba sy ny fepetra hanomezana azy no tsy mety eto amintsika. Tokony ho izay mahay sy hita fa mamiratra irery ihany no mahazo vatsim-pianarana. “Famosaviana” nataon’ny Revolisiona sosialista mantsy io fizarana vatsim-pianarana io, nentina nanafenana ny tsy fahombiazan’ny politika tamin’izany fotoana, tahaka ny fizarana 4×4 ho an’ny solombavambahoaka tamin’ny andron’ny Repoblika faha-telo tapany voalohany ihany. Tsy vitan’ny hoe “famosaviana” ny mpianatra fotsiny ihany fa lasa aretina mikiky ny sehatry ny Fampianarana ambony mihitsy, tsy ireo izay tena vonona hianatra no mahazo tombotsoa fa izay mahitahita.
Inona no tiana ambara amin’izany rehetra izany? Mila fanavaozana tanteraka ny lafiny Fampianarana eto amintsika. Tokony hofoanana avokoa ireo endrika “famosaviana” mpianatra napetraky ny fitondrana nifandimby tsy nitera-bokatsoa ho an’ny firenena. Io Fampianarana io anefa no fototry ny zava-drehetra.